> Resource > Android > Beddelaan AIFF, M4B, M4R in MP3 for uploading in Google Music
Google Music ayaa si rasmi ah la sii daayay ayaa dhawaan. Sida ay naga imtixaanka iyo isticmaalka, waxaa jira faa'iidooyin badan gelin Google Music boos tartan fiican, boos lacag la'aan ah online ilaa 20000 songs, 320kbps tayo sare leh kuwan raadkaygay, free dalabyo song, ciyaaryahanka web saaxiibtinimo oo si fudud la wadaago Google+.
Waa hagaag, Google Music ayaa sidoo kale ka dhicin fasalada. Tusaale ahaan, waxa aanu u taageeraan kuwaas oo qaabab audio caanka ah ee Mac: AIFF, M4B, M4R, M4P , iwm Sidaas darteed haddii aad ku go'aansadeen in ay u baddashaan Google Music, kuwani waa dhibaato aad u baahan tahay si uu u xaliyo. Oo waa inaad hadda ku sugan yihiin meel sax ah. Raac tallaabooyinka fudud si loogu badalo AIFF, M4B, M4R in MP3 in ay si buuxda u taageeray by Music Google (ilaa 320kbps bitrate). Wondershare Google Music Converter loo isticmaali doono.
Raac tallaabooyinkan fudud si ay u soo jeesan oo dhan qaabab Apple oo caan ah si ay Google Music MP3 format socon. Ogsoonow in DRM koobi-ilaaliyo files M4B iyo M4R ma taageersana.
Tallaabo 1: Ku dar AIFF, M4B, M4R in Google Music Converter
Burcad Google Music Converter u Mac, iyo dar AIFF, M4B, files M4R in 3 siyaabood:
1. Jiid jeedi ee files audio aad rabto in aad si loogu badalo galay interface ugu weyn.
2. Tag bar menu iyo dooran File > Media Load Files, ka dibna ku dar files audio aad rabto.
Riix qaab icon ugu hooseysa in ay doortaan qaab wax soo saarka. oo wuxuu qotomiyey tayada music haddii loo baahdo. Marka hore, waxay dooran MP3 ka Audio liiska guji marsho Settings icon u dhigay heerka muunad iyo heerka yara.
Tallaabo 3: U beddelaan AIFF, M4B, M4R in Google Music MP3
Hadda riix "Beddelaan" button marka wax walba waa diyaar, iyo Converter Google Music for Mac badalo doonaa oo dhan AIFF ah laga keeno, M4B, M4R files si qaab MP3. Next, aad u aragto sida ay u geliyaan files music in Google Music.
Ogaysiis : Haddii aadan dajiyaan karaa M4B iyo M4R files audio in Google Music Converter, ay u badan tahay in ay yihiin FairPlay DRM koobi-ilaaliyo. Waxaad u ciyaari karo la Lugood inaan fiirino. Lugood ku weydiin doonaa inaad awood u your computer la accound aad loo isticmaalo si aad u iibsato M4B iyo M4R la ilaalin nuqul DRM.
Waa maxay AIFF, M4B, M4R, M4P?
AIFF , gaaban Qaabka File Audio waydaartaan, waxaa markii hore ee ay shirkadda Apple Computer. AIFF audio dukaamada CD tayo qaab sameecadda ah oo aan ciriiri,, oo la mid ah .WAV format. Files AIFF caadiga ah waxay leeyihiin .AIF magaca kordhin in nidaamka Windows.
M4B iyo M4R : M4B waa magaca kordhin ah Audio Book files in ay soo bixi Apple Lugood dukaanka. M4R waa caadadii iPhone files ringtone. Labada iyaga ka mid ah waa la nuqul ka dhawray laga yaabaa in la isticmaalayo Apple ee FairPlay DRM.
heeso Lugood ay ka mid yihiin ilaalinta copyright leeyihiin. an M4P kordhin kaas oo sidoo kale ma ay taageerayaan Google Music, laakiin aad u bedeli karaan in MP3 isticmaalayn Converter warbaahinta inuu xidho Music Google.
Sida loo Play Google Music offline